७ महीनामा साढे २ अर्बको सिमेन्ट तथा क्लिंकर आयात – Himalitimes
७ महीनामा साढे २ अर्बको सिमेन्ट तथा क्लिंकर आयात
२०७७ फाल्गुन १७ ०५:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को ७ महीनामा रू. २ अर्ब ५५ करोड बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर आयात भएको छ ।
नेपाली सिमेन्ट तथा क्लिंकर उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालन भई पूर्ण क्षमतामा उत्पादन नभएपछि आत्मनिर्भर उन्मुख र बढी लगानी भएको यो क्षेत्रमै आयात बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।
नेपालको ठूलो सिमेन्ट उद्योग मानिने होङ्शी सिमेन्टको प्लान्ट १ महीनासम्म बन्द हुँदा पनि उत्पादन तथा आयातको शृंखलामा असर परेको सिमेन्ट तथा क्लिंकर उत्पादक बताए । होङ्शीको उत्पादन बन्द हुँदा र अन्य सिमेन्ट उद्योग सिमेन्ट मात्रै उत्पादनमा लाग्दा क्लिंकर उत्पादनमा केही कमी आएको न्यौपानेले बताए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका समयमा गाडीहरू नचलेको, क्लिंकरको कच्चा पदार्थ चुनढुंगा निकासीमा अवरोध आएको, उत्पादन नगर्दा फ्याक्ट्रीहरूको मर्मतसम्भार गर्नुपरेको जस्ता विषयले क्लिंकर उत्पादनमा केही समस्या भएको छ । यसका कारण अहिले मासिक रूपमा नै क्लिंकर आयात बढ्दो क्रममा रहेको छ । अहिले सिमेन्ट तथा क्लिंकरको उत्पादन बढेको र खपत पनि बढ्दो क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा आयात घट्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
पछिल्लो समय सिमेन्ट तथा क्लिंकरमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पनि बढेको र उत्पादन क्षमतामा पनि वृद्धि भएकाले आयातमा क्रमिक रूपमा कमी आउने अपेक्षा उनीहरूको छ । २०७६/७७ मा पनि रू. ४ अर्ब ४१ करोडको क्लिंकर आयात भएको थियो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा हिमा बि.क. ले लेखेकी छ्न ।
लोकसेवा आयोगमा बढी सोधिने र झुक्याउने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरु